Guul Daradii Barca, Bandhigii Messi & Macalinka Atletico Oo Ka Hadlay Hadii Ay Ka Quusteen La Liga %
Tababaraha kooxda kubada cagta Atletico Madrid, ninka lagu magacaabo Diego Pablo Simeone, ayaa wuxuu uga waramay wariyaasha guul daradii kasoo gaartay kooxdiisa dhigeeda Barcelona, taasoo 1-0.
Macalinkaan dalka Argentina udashay ayaa wuxuu ku calaan-calay in hadii Lionel Messi, uu iyaga udheeli lahaa aysan guul daradaan soo gaari lahayn, islamarkaana ay guusha dhankooda soo mari lahayd ciyaartii ka dhacday Camp Nou.
Simeone, ayaa waxyaahana kale, ee uu uga hadlay shirkiisa Jaraa’id ee kadib ciyaartii Barca ayaa waxaa kamid ah rajadooda horyaalka La Liga, isagoona si cad usheegay in wali ay yihiin kuwa dagaal diyaar u ah.
“Hadii aan soo qaadan lahayn Messi, oo aan ugelin lahayn Maaliyada Atletico, ciyaarta waxaan ku badin lahayn 1-0,” ayuu saxaafada si cad uga hor-sheegay hogaamiyaha kooxda kaalinta labaad uga jirta La Liga.
“Waxaa nan shaki ku jirin, inaan nahay kuwa aad ugu dawaaday inay gaaraan hadafkooda [Inay guuleystaan],” ayuu raaciyay.
“Wax aanan macquul ahayn ayaa waxaan ka dhignay suuragal [Markii ay horyaalka qaadeen 2013/14] laakiin hadda waa mid ay adag tahay inay soo celino wixii aan diiday wax 14 sano dhacayay,” ayuu sii daba dhigay.
“Ma aanan filayn inay dhacayso [in gool laga dhaliyo qeybta koowaad], laakiin wax walba waxaan uga jawaabnay qeybta koowaad iyo labaad sida ugu macquulsan,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Messi, waa ciyaaryahan qaar ah, kaasoo mar walba sameeya isbedal,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, tababaraha Atletico Madrid, Diego Simeone kaasoo umuuqday mid aaminsan in ciyaartoydiisa uu kala diray Messi.
Barcelona vs Atletico MadridDiego Pablo Simeone
Conte Muxuu Ka Yiri Guul Daradii City, Bandhiga Kooxdiisa, Rajadooda 4 Sare & Mustaqbalkiisa